IoT (Internet of Things) ဆိုတာဘာလဲ?ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ? – DigitalTimes.com.mm
Internet of Things (IoT) ဆိုတာကို အရှင်းဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ Device တစ်ခုက အင်တာနက်ကိုသွားချိတ်ထားရင် (ဒါမှမဟုတ်) အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Device တွေကိုသွားချိတ်ထားရင် အဲဒီချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Device တွေကို IoT device တွေလို့ခေါ်တာပါပဲ။ လူတွေ Device တွေချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကွန်ယက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အသုံးပြုမယ့်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ ဒေတာတွေစုဆောင်း sharing လုပ်ပေးပါတတယ်။
ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ ဆိုဒ်မျိုးစုံနဲ့ အရာဝတ္ထုတွေ ဥပမာ အစားအစာတွေကို အချိန်ပမာဏအတိအကျနဲ့အော်တိုချက်ပေးနိုင်တဲ့ စမတ်မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်ကစလို့ Sensor တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ Self-Driving ကားတွေ၊ နှလုံးခုန်နှုန်းတွေ လမ်းလျှောက်တဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုခြေရာခံတိုင်းတာနိုင်တဲ့ Fitness Device တွေအပြင် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ IoT Device ပေါင်းများစွာရှိနေပါပြီ။
ဒီ IoT device တွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ??
sensor တွေတစ်ခါတည်း ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အရာဝတ္ထုတွေကို Internet of Things platform နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပြီး သူနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ Device တွေကရလာတဲ့ဒေတာအမျိုးမျိုးကို ပေါင်းစပ်ပြီးမှ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်။
ဒီ IoT platform တွေကမှ ဘယ်အချက်အလက်တွေကတော့ အသုံးဝင်တယ် ဘယ်အချက်တွေကိုတော့ လျစ်လျူရှုလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဒီဒေတာတွေကနေတစ်ဆင့် သေချာသိနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာကို မဖြစ်ခင်ကတည်းက တားဆီးနိုင်ဖို့ ဖြေရှင်းချက်တွေ Recommendation တွေအတွက် ဒီ device တွေဆီကရလာတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသုံးရပါတယ်။ စမတ်ပစ္စည်းတွေစနစ်တွေရဲ့အားသာချက်ကိုက ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်နေရတဲ့၊ အချိန်ကုန်တဲ့ တစ်ခါတစ်လေအန္တရာယ်တောင်များတဲ့ကိစ္စတစ်ချို့ကို အော်တိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာပါပဲ။
အိမ်တစ်အိမ်မှာဆို IoT က ဘယ်လောက်အကျိုးရှိလဲ တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပါ။
မနက်တိုင်း အလုပ်သွားဖို့ ၇နာရီ Alarm ပေးထားတယ်ဆိုပါစို့။ နောက်မကျခင်ထိတော့ Alarm ပေးတယ်ထသွားတယ် ဒါအိုခေပါတယ်။ တကယ်လို့များ ခုရက်ပိုင်းလို လမ်းပြင်မယ် ကားတွေပိတ်မယ် ကြားထဲမိုးတွေကရွာတယ် ထင်တာထက်ပိုနောက်ကျနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာ ပုံမှန်လို ၇နာရီထရင်နောက်ကျမှာကျိန်းသေပါပဲ။ အဲလိုအချိန်မှာ ဒီ IoT ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေက ကားမောင်းရမယ့်အကွာအဝေး ကြာမယ့်အချိန်ကိုခန့်မှန်းတွက်ချက် ရာသီဥတုအခြေအနေစစ် မိုးရွာလို့လမ်းပိတ်ပြီးကြာမယ့်အချိန်တွေကိုပါ ခန့်မှန်းပြီး ထသင့်တဲ့အချိန်ကို အော်တို Alarm ပေးထားမှာဖြစ်လို့ အလုပ်ကိုနောက်ကျစရာလမ်းမရှိတောပါဘူး။ ဒါတွေအပြင် IoT နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကော်ဖီစက်တွေနဲ့သာဆိုရင် ထပြီး အလုပ်မသွားခင် ကော်ဖီကို ရယ်ဒီလုပ်ပေးထားပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုပါပဲ IoT တွေရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကိုတစ်ခုချင်းလိုက်ပြောရင်ကုန်နိုင်မယ်မထင်တော့ပါဘူး။ အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Device တွေဆီကနေ ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးထူးသက်သာအဆင်ပြေစေနိုင်လဲဆိုတာ လက်ရှိ IoT ရဲ့ရင်းနှီးအသုံးတည့်နေတဲ့သူတွေများရှိရင် Comment မှာဝေမျှပေးသွားလို့ရပါတယ်။
Internet of Things (IoT) ဆိုတာကို အရှငျးဆုံးအနနေဲ့ပွောရရငျတော့ Device တဈခုက အငျတာနကျကိုသှားခြိတျထားရငျ (ဒါမှမဟုတျ) အငျတာနကျခြိတျဆကျထားတဲ့ Device တှကေိုသှားခြိတျထားရငျ အဲဒီခြိတျဆကျထားတဲ့ Device တှကေို IoT device တှလေို့ချေါတာပါပဲ။ လူတှေ Device တှခြေိတျဆကျထားတဲ့ ကှနျယကျကွီးတဈခုဖွဈပွီး အသုံးပွုမယျ့ပျေါလိုကျပွီးတော့ ဒတောတှစေုဆောငျး sharing လုပျပေးပါတတယျ။
ဒီဇိုငျးမြိုးစုံ ဆိုဒျမြိုးစုံနဲ့ အရာဝတ်ထုတှေ ဥပမာ အစားအစာတှကေို အခြိနျပမာဏအတိအကနြဲ့အျောတိုခကျြပေးနိုငျတဲ့ စမတျမိုကျခရိုဝဗျေ့ကစလို့ Sensor တှတေပျဆငျထားတဲ့ Self-Driving ကားတှေ၊ နှလုံးခုနျနှုနျးတှေ လမျးလြှောကျတဲ့ခွလှေမျးတှကေိုခွရောခံတိုငျးတာနိုငျတဲ့ Fitness Device တှအေပွငျ အငျတာနကျခြိတျဆကျထားတဲ့ IoT Device ပေါငျးမြားစှာရှိနပေါပွီ။
ဒီ IoT device တှေ ဘယျလိုအလုပျလုပျလဲ??
sensor တှတေဈခါတညျး ထညျ့သှငျးတညျဆောကျထားတဲ့ ပစ်စညျးတှေ အရာဝတ်ထုတှကေို Internet of Things platform နဲ့ခြိတျဆကျလိုကျပွီး သူနဲ့ခြိတျထားတဲ့ Device တှကေရလာတဲ့ဒတောအမြိုးမြိုးကို ပေါငျးစပျပွီးမှ အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့အခကျြအလကျတှကေိုထုတျပေးပါတယျ။
ဒီ IoT platform တှကေမှ ဘယျအခကျြအလကျတှကေတော့ အသုံးဝငျတယျ ဘယျအခကျြတှကေိုတော့ လဈြလြူရှုလို့ရနိုငျတယျဆိုတာကို ဒီဒတောတှကေနတေဈဆငျ့ သခြောသိနိုငျပါတယျ။ ပွဿနာကို မဖွဈခငျကတညျးက တားဆီးနိုငျဖို့ ဖွရှေငျးခကျြတှေ Recommendation တှအေတှကျ ဒီ device တှဆေီကရလာတဲ့အခကျြအလကျတှကေိုသုံးရပါတယျ။ စမတျပစ်စညျးတှစေနဈတှရေဲ့အားသာခကျြကိုက ထပျခါထပျခါလုပျနရေတဲ့၊ အခြိနျကုနျတဲ့ တဈခါတဈလအေန်တရာယျတောငျမြားတဲ့ကိစ်စတဈခြို့ကို အျောတိုလုပျဆောငျပေးနိုငျတာပါပဲ။
အိမျတဈအိမျမှာဆို IoT က ဘယျလောကျအကြိုးရှိလဲ တဈခကျြကွညျ့ရအောငျပါ။
မနကျတိုငျး အလုပျသှားဖို့ ၇နာရီ Alarm ပေးထားတယျဆိုပါစို့။ နောကျမကခြငျထိတော့ Alarm ပေးတယျထသှားတယျ ဒါအိုခပေါတယျ။ တကယျလို့မြား ခုရကျပိုငျးလို လမျးပွငျမယျ ကားတှပေိတျမယျ ကွားထဲမိုးတှကေရှာတယျ ထငျတာထကျပိုနောကျကနြိုငျတဲ့အခွအေနမှော ပုံမှနျလို ၇နာရီထရငျနောကျကမြှာကြိနျးသပေါပဲ။ အဲလိုအခြိနျမှာ ဒီ IoT ခြိတျဆကျထားတဲ့ပစ်စညျးတှကေ ကားမောငျးရမယျ့အကှာအဝေး ကွာမယျ့အခြိနျကိုခနျ့မှနျးတှကျခကျြ ရာသီဥတုအခွအေနစေဈ မိုးရှာလို့လမျးပိတျပွီးကွာမယျ့အခြိနျတှကေိုပါ ခနျ့မှနျးပွီး ထသငျ့တဲ့အခြိနျကို အျောတို Alarm ပေးထားမှာဖွဈလို့ အလုပျကိုနောကျကစြရာလမျးမရှိတောပါဘူး။ ဒါတှအေပွငျ IoT နဲ့ခြိတျဆကျထားတဲ့ ကျောဖီစကျတှနေဲ့သာဆိုရငျ ထပွီး အလုပျမသှားခငျ ကျောဖီကို ရယျဒီလုပျပေးထားပါလိမျ့မယျ။
ဒီလိုပါပဲ IoT တှရေဲ့လုပျဆောငျနိုငျတဲ့စှမျးရညျတှကေိုတဈခုခငျြးလိုကျပွောရငျကုနျနိုငျမယျမထငျတော့ပါဘူး။ အငျတာနကျနဲ့ခြိတျဆကျထားတဲ့ Device တှဆေီကနေ ကိုယျ့အတှကျဘယျလောကျထိအကြိုးထူးသကျသာအဆငျပွစေနေိုငျလဲဆိုတာ လကျရှိ IoT ရဲ့ရငျးနှီးအသုံးတညျ့နတေဲ့သူတှမြေားရှိရငျ Comment မှာဝမြှေပေးသှားလို့ရပါတယျ။